एनआईसी एशिया बैंकले ८० करोड बोनस शेयर वितरण गर्ने - एनआईसी एशिया बैंकले ८० करोड बोनस शेयर वितरण गर्ने
एनआईसी एशिया बैंकले ८० करोड बोनस शेयर वितरण गर्ने
२०७५, ४ पुष, 06:05:20 PM
काठमाडौं । एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडको साधारण सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम १०% का दरले ८० करोड ३१ लाख ११ हजार ७ सय बोनस शेयर वितरण गर्ने भएको छ । बैंकको २१ औं वार्षिक साधारण सभामा उक्त बोनस शेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैंकले कर प्रयोजनको लागि ०.५२६५ अर्थात ४ करोड २२ लाख ६९ हजार ३७ रुपैयाँ नगद लाभांस वितरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सभाले बोनस शेयर वितरणबाट बैंकको साविक अधिकृत पूँजी ८ अर्ब ४ करोडलाई वृद्धि गरि ८ अर्ब ८४ करोड बनाउन, साविकको तत्काल चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ३ करोड ११ लाख १६ हजार ९ सय ९८लाई वृद्धि गरी ८ अर्ब ८३ करोड ४२ लाख २८ हजार ६सय ९८ बनाउन स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
साधारण सभाले आ.व. २०७४र०७५ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिबेदन पारित गर्नुको साथै लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सहित २०७५ आषाढको वासलात र आ.व. २०७४र७५ को नाफा–नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरु स्वीकृत गरेको छ ।
साथै साधारण सभाले बैंकको सहायक कम्पनी एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था र एन आई सी एशिया क्यापिटल सहितको आ.व. २०७४र७५ को एकिकृत वित्तीय विवरण समेत स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी, सभाले चालु आ.व. २०७५र७६ को लागि टिआर उपाध्याय एण्ड कम्पनीलाई बाह्य लेखापरिक्षकमा नियुक्त पनि गरेको छ ।